Haddii aad raacdid tallooyinka hoose, waad ka illaalin kartaa nafsaadada qaar ka mid ah cudurada faafa.
Illaalada ugu sahlan oo ugu wax ku oolka badan ee la dagaalanto cudurada faafa waa si joogto u dhaqida gacmahaaga iyo saabuun. Dhaq gacmahaaga ugu yaraan safar walba kadib ee musqusha iyo cunista waxba ka hor.
Nadaafada iyo Daryeelka Gaarka ah
Si joogta ah u qubeyso oo u dhaq gacmahaaga sadex jeer maalintii.
Daryeelka gaarka joogtada ah ee cudurada. Haddii aad leedahay ilko xanuun, la xiriir Medic-Help.
Tallaalada waxay ka hortagi karaan dhoor cudur. Inta qof ee la tallaalo, inta qof oo xanuunsaneyso.
Maamulada Caafimaadka Swiss waxay ku taliyaan dadka kale oo ka mid ah tallaalka la dagaalamo
Aad Medic-Help oo la taliyayaasheena hakula taliyeen.
Intaa waxaa dheer AIDS waxaa jiro cuduro kaloo badan oo galmo ahaan lagu qaadi karo. Si dadaal ah uga ilaali nafsadaada HIV/Aids marka ad marwalba isticmaashid kondhom inta lagu jiro galmo. Waxaa sidoo kale jiro kondhomyo isticmaal ah oo dumarka.
Kondhomyada waxaa lagu bixiyaa xarunta ama waxaad ka iibsan kartaa farmashiyada, dukaamada daawada iyo dukaamada inta badan.
Haddii aad dib u isticmaashid saliingooyinka adiga oo isticmaalayo daroogo waxaad ku qaadi kartaa dhinaca dhiiga. Marwalba isticmaal saliingo nadiif, aan la isticmaalin.
Haddii aad uur tahay, la xiriir Medic-Help. Medic-Help ayaa adiga kaala hadlayo waxa aad u baahantahay iyo sida adiga iyo ilmahaaga waxay ahaanayaan caafimaad iyo diyaarinada balanta oo ay la jirto taqasuska caafimaadka.
Carruurtaada si joogto ah ha u eegaan Medic-Help. Medic-Help sidoo kale waxay kugu caawisaa nafaqada iyo daryeelka canugaaga. Sidaas darteeda, carruurtaada waxay ahaanayaan kuwa caafimaadan oo si wanaagsan ayay u korayaan.